Cloudya: NFON Yakanakisa Cloud Nhare Sisitimu | Gadget nhau
Kukurukurirana mugore kuri kuwana kuvapo mumusika. Ivo vanoratidzwa semukana wakanaka kumakambani, mukuitika kwekushandurwa kwedigital kwekutaurirana kwataurwa. Mundima iyi mune kambani inomira pamusoro pevamwe vese, iri NFON. Iyi kambani inokonzeresa kumashure kweCloudya, gore telephony system. Kutenda kwazviri, kutaurirana kwekambani kwakatarisana neshanduko.
Cloudya inotsvaga kugadzirisa kutaurirana kwebhizimusi munzvimbo dzakasiyana. Pamusoro pazvose, chokwadi chekuva nerusununguko kubva kune vane hombe mashandiro chinhu chinogona kuve chakanyanya kufarira kumakambani mazhinji. Naizvozvo, pazasi isu tichakuudza zvese nezve ichi chikumbiro cheNFON uye nezvavanofanira kupa.
1 Chii uye sei inoshanda Cloudya
2 Mabasa muna Cloudya
3 NFON gore runhare
4 Maitiro ekuwana Cloudya
Chii uye sei inoshanda Cloudya
Iyo gore telephony system, iyo inobvumidza kuve nekutaurirana kusununguka kwezvisungo mukambani. Imwe yemabhenefiti makuru ayo Cloudya anopa ndeyekuti inogona kushandiswa pamhando dzese dzemidziyo, senge PC, laptop kana smartphone. Nenzira iyi, kufona kana vhidhiyo mafoni anogona kuitwa nyore. Kunyangwe ichi chisiri icho chete chinhu chinogona kuitwa nekuda kweichi sevhisi.
Iyo inokutendera iwe kuve nehunyanzvi hunoshanda hwehofisi yako yekuwedzera inogara uinewe, muhomwe yako. Kutenda nebasa iri zvinogoneka gamuchira faxes manhamba, pane yako smartphone, chero kwauri. Uye zvakare, ivo vane chaiwo makamuri emusangano, zvichibva pane chaicho chaicho. Izvo zvakagadzirirwa kuchengetedza mari yekufambisa uye kuita musangano nenzira iyi zvakananga kubva kubhurawuza remakomputa.
Zvese izvi zvinogoneka nekuda kwemushandisi-inoshamwaridzika interface. Cloudya yakagadzirirwa nenzira yekuti vashandi vese mukambani vanogona kushandisa zvakanaka. Nhamba yakasarudzika yefoni uye inbox inoshandiswa kubata mushandi wega wega. Izvi zvinobatsira kwazvo kushandiswa kune chero mushandi.
Mabasa muna Cloudya
Mamwe emabasa ayo akatove ataurwa muchikamu chakapfuura, kunyangwe iyo NFON pachayo inoita kuti iwanikwe kune vese a runyorwa ruzere rwemabasa izvo zvinosanganisirwa muCloudya, zvinova izvo zvinogona kuunza kufarira mumakambani mazhinji. Urwu ndirwo runyorwa razvino rwemabasa aripo:
Cloud foni system: Source-based kufona kuendesa mberi, Nyika uye epasi rese mafoni, Virtual fax
Dana manejimendi: Kutamisa kufona, IVR, CLIP, CLIR, kufona nzira, voicemail
Kubatanidzwa kwechigadzirwa: Mamenyu efoni
Chikumbiro pasuru: Moderated musangano kufona, kusanganisa kwe smartphone
Telecommunication kunyorera: ITC
Kuwedzera software: Operator pani
Izvi zvinopa chimiro chakanaka cheiyo maturusi mazhinji uye sarudzo dziripo mubasa iri. Nenzira iyi, kutaurirana kwekambani kuchashandurwa nenzira yakanaka. Kuwedzera rusununguko, nyore kushandisa uye nekuwedzera mikana, iyo inobvumidza kutaurirana kuri nani nguva dzese.
Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinopihwa naNFON uye Cloudya. Pane huwandu hwezana nemakumi mashanu emabasa aripo, iwe unogona kuona mune iyi link. Idzo ndidzo dzakagadziriswa mhinduro dzemhando dzakasiyana dzemakambani, senge mahotera, zvipatara, mabhangi, nzvimbo dzemabhizinesi uye zvimwe zvakawanda. Ivo vanoenderana zvakakwana kune ese marudzi emabhizinesi.
NFON gore runhare
Nyanzvi zhinji dzatoona gore nharembozha sezveramangwana mukutaurirana. Parizvino, tiri kuona kuti iri kuwana sei kuvepo mumusika, kunyanya mundima yebhizinesi, uko shanduko yedhijitari iri kuitika. Kubheja parunhare mugore kunotendera kambani kuti isavimbe nevashandisi vakuru. Ichi chinhu chinogona funga kukosha kwakakosha kwemari kune chero kambani. Uye zvakare, nekutengesa pamasevhisi akaita seCloudya, iwe unowana yakasarudzika uye yehunyanzvi sevhisi, iyo inopa zvakanyanya kutarisisa kutarisisa zvichienderana nekambani
Imwe yekiyi dzegore telephony ndeyekuti ndeye hunyanzvi hwehunyanzvi hunoshanda nemazvo uye hunobvumidza kambani kuwana mhedzisiro iri nani. Sezvo kutaurirana kwakanaka kunopihwa nguva dzese, zvese mukati nekunze. Saka zvichave nyore kugara uchikurukura uye kuwanika kune vatengi, pasina zvinokanganisa pane imwe nguva. Imwe yemabhenefiti ayo ndeyekuti kunyangwe mumakambani madiki, inobvumidza kuve neswitchboard, kupindura mafoni kubva kune vatengi kana vangangove vatengi.
Unofanirawo kudaro simbisa kuchinjika kwainopa, nemitengo yakaderera, mukuwedzera mukufambisa hofisi zviri nyore kwazvo kuzviita nenzira iyi. Kuwana kune yakanzi switch switchboard inopihwa chero kupi zvako pasi, chimwe chinhu chakakosha zvakanyanya kune vashandi vanofanirwa kufamba zvakawanda mukuita kwebasa ravo. Nzira yekuwana zvakare iri nyore, nekuti iwe unofanirwa chete kubatanidza mudziyo.
NFON yakamisikidzwa semhinduro yekutanga mune ino chikamu chemusika. Chivimbiso chemhando yepamusoro, chinopa sevhisi yakanaka, ine kukosha kwakanyanya kwemari pamusika. Uye zvakare, ivo vanotendera kuwedzeredza mutengo, sezvo zvemukati mafoni kubva kune imwecheteyo switch switchboard uye pakati pevatengi mahara. Chinhu chinotendera makambani kuchengetedza zvakanyanya.
Maitiro ekuwana Cloudya
Kune iwo makambani anoda kuziva zvakawanda nezve Cloudya, vanogona kuenda kune webhusaiti yekambani, mune iyi link yatichangobva kukusiya. Heano anowanikwa ese ruzivo nezve masevhisi akaisirwa muCloudya, mukuwedzera mukukwanisa kuona mabhenefiti ayo ainopa zvichienderana nerudzi rwekambani yaunayo. Saka iwe unogona kuziva nenzira yakapusa izvo zvinogona kubatsira kukambani iri mumunda wekutaurirana, kana iyo mari yekuchengetedza inobatanidzwa mukubheja pazviri.
Kune rimwe divi, kana iwe uchifarira, unogona kubata NFON zvakananga kuburikidza newebsite yako, kune rumwe ruzivo nezve Cloudya, kana mune nyaya yekuda kutanga kushandisa masevhisi avo. Chikwata chako chichava icho chinokutungamira nenzira yekutanga nebasa iri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Cloudya: Yakanakisa gore nhare mbozha
Ungaziva sei anondifonera ine nhamba isingazivikanwe